Antenimierandoholona : handamina ny fifandiran’i Lylison sy A. Riana ny birao maharitra | NewsMada
Antenimierandoholona : handamina ny fifandiran’i Lylison sy A. Riana ny birao maharitra
Tsy mbola nifarana eo. Nambaran’ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, omaly tetsy Anosy, fa efa vita sy nilamina ny momba ny Jly Rakotomahanina Florens sy ny loholona Lylison. « Nihaona sy nihavana izy ireo tamin’ny andron’ny zandarimariam-pirenena teo ary naneho fanajana ny maha zandry azy eo amin’ny galona ny loholona Lylison… Halamin’ny birao maharitra (BP) kosa ny momba azy mirahalahy, Lylison sy Andriamandavy Riana, fa aza matahotra », hoy izy tamin’ny mpanao gazety.
Anisan’ny anton’izany ny fifandroritana teo amin’izy ireo tao amin’ny fahitalavitra iray ny faran’ny herinandro teo ary nifampiampanga momba ny 2009. Nifanenjana koa tamin’ny fanateram-boninkazo ny 29 marsa teo. « Mifampitantana sy miray hina ny loholona nefa koa malalaka amin’ny fitenenana », hoy ihany Rakotomanana Honoré.
Ankoatra izany, voaresaka koa ny asan’ny mpanao gazety, ny amin’ny tokony hilazana ny marina. Nanome toky ny tenany fa hivoha ho an’ny mpanao gazety ny varavarana etsy Anosikely. Na izany aza, nambarany fa tokony hodinihina haingana ny sata na ny lalàn’ny fifandraisana sy ny serasera.